Igama le-chrysoprase lenziwa ngamagama amaGrike ama-leeks-prasos negolide-chrysos. Ngamaxesha amandulo eli litye lalibizwa ngokuba yi-chrysoprase. I-Chrysoprase luhlobo lwe-chalcedony eguquguqukayo. Inemibala emininzi yambala ukusuka eluhlaza-bluish ukuya kwi-apula-eluhlaza, i-emerald eluhlaza. Iindleko zeminerali ziqikelelwa ngolu hlobo lulandelayo: ngakumbi xa zicaca kwaye zizalisekile umbala welitye, zibiza kakhulu. I-chrysoprases ehlaza kunye ebonakalayo inekhwalithi yobucwebe. Ngamanye amaxesha ukusika i-chrysoprases egciniweyo egciniweyo ididekile kunye ne-emerald.
I-Chrysoprase ibhekisele kwikota ye-quartz kwaye iyona nto ibaluleke kakhulu-i-chalcedony. I-hue eluhlaza ye-chrysoprase iyakwazi ukukhanya ekukhanyeni okukhanyayo, ukuze ubuyisele umbala wangaphambili we-chrysoprase, kufuneka ihlanganiswe ngendwangu emanqwenxa okwesikhashana. Umbala weemaminerali ngenxa yobungcola obunjengoku: i-pimelite, bunsenite, i-garnierite kunye namanye amaminerali ane-nickel.
Iimpawu ezibonakalayo ze-crystal ziyi-gloss gloss, i-translucent kwi-lumen.
Iifosti ze-chrysoprase. Iifosti ze-chrysoprase zixhomekeke kwi-nickel-bearing hyperbasites kunye nemozulu yazo. I-Chrysoprase ayiyithandabuli kakhulu kwimvelo. Okwangoku, kwimarike yehlabathi, u-Australia ngumthengisi oyintloko we-chrysoprase esemgangathweni. Kwakhona, i-crystal deposits zifumaneka kumazwe aseCIS (uNovo-Akkerman, uSarykul-Boldy), eMzantsi Melika naseMntla Melika.
Ukusetyenziswa kwe-chrysoprase. I-chrysoprase yinto ekhethiweyo kakhulu njengaphambili, kwaye ngoku. Ugugile wodwa, kwaye ufakwa kwizinto zokugqoka - igolide kunye nesiliva. Le mineralari yintlobo ehlambulukileyo kwaye ebiza kakhulu kwi-chalcedony, iyasetyenziswa ngokubanzi ekuveleni kwezinto zokugcoba kwiimpawu zesandla kunye nezimo zefektri.
Izakhiwo zonyango. Kukholelwa ukuba i-chrysoprase iyisisombululo esihle kakhulu ekunyangekeni kwezifo zamehlo, kunye negalelo lokunyuka kwezinto ezibonakalayo. Kuthiwa i-chrysoprase inepropati yokuphucula umsebenzi weengqungquthela ze-endocrine, kunye nokwandisa amandla onke okusebenza kunye nokulungelelanisa i-metabolism kubantu. Izinto zokuphilisa i-chrysoprase zifana nezo zenye iimaminerali zombala oluhlaza. Kukholelwa ukuba umbala obomvu welitye luphucula kakhulu intlalo-ntle yabantu abangenayo imithenda ngexesha lokunyuka komsebenzi weLanga. Ngokutsho kweengcebiso ze-lithotherapists, le mineralari kufuneka isetyenziswe, kunye nokuphazamiseka kokulala, ukwanda kweempawu zokukhathazeka kunye neemeko zokuxhalabisa ebusuku. Amanzi, afakwe nge-chrysoprase, ngamanye amaxesha asetyenziswa kwiibanda. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukutyhila ixesha elide kule mineral kungakhuthaza ukubunjwa kwamatye kwi-gallbladder yabantu.
I-Chrysoprase inefuthe elihle kwintliziyo ye-chakra.
Izakhiwo zobugqi . Ngaphambili, i-chrysoprase yayidibene nempumelelo. Uyaziphathisa abantu abasaqalayo kunye nabantu abathambekele kwizixhobo. I-chrysoprase inikeza amathuba amnandi ngezinto ezintsha kunye nokuqala, ngenxa yesifiso sokutshintsha. Ngokuqhelekileyo kuzisa inhlanhla kubantu abangenako ukwesaba enye entsha ebomini babo. I-Chrysoprase ngokuqhelekileyo ibhekwa njengabantu abenza izinto ezintsha, bengesabi izinto ezintsha kunye neendlela ezintsha. Kukwafanelekile ukuba kuthathwa njengento engabonakali kubanki, abahwebi, abahwebi kunye nabantu abafana nemisebenzi efanayo. Ngenxa yombala wayo oluhlaza, i-chrysoprase inokuphucula isimo sengqondo.
I-Chrysoprase idume ngokukwazi kwayo ukunyelisa ukunyundela, umona, "isohlo elibi". Kwakhona kuthiwa i-chrysoprase isenokususa i-spoilage kwaye ikukhusele kwezinye iimpawu ezifanayo. Eli ilitye lenqaba ukunceda abantu abanokukrokra, abakhohlisayo, abaxhamlayo, abangenakulinganisela kunye nabazimeleyo. Kule meko, akukho nto iya kunceda ukwenza itywala isebenze. Le mineral ingancedisa abantu abanempahla enjalo njengobungangamsha kunye nodumo. I-chrysoprase ithathwa njengenkani enkulu. Abantu abanezimpawu zobuntu njengobungangamsha kunye nodumo, i-chrysoprase inika abahlobo, ikhusela entlekweni, nokuba umntu uyazikhupha. Le crystal iya kunceda nakweyiphi na imeko entsha, njengoko izakhiwo zalo zomlingo zikhona kwizinto ezintsha.
Xa i-chrysoprase i-turbid, ithetha ukuba umniniyo useyingozi. I-chrysoprase ikholelwa ukuba iqhube ukuthusa ebusuku. Okwangoku, ilitye lisetyenziswe njengesithintelo esinokwethenjelwa kumandla ambi, iyakunqanda ukunyundela, umona, isohlo elibi kwaye inika umonde kumnini. Kunconywa ukuba kusetyenziswe ilitye njengendoda, abantu abadibene nemisebenzi yorhwebo kunye nokuqeqeshwa kwabo baphoqelelwe ukuba bajongane nemali emininzi yemali. Kuba abantu abaxoxayo ilitye liphela phambi kwamehlo ethu. Ekubeni amaxesha amandulo i-chrysoprase yayigqoke njengogada kubantu abanobukhwele, amehlo abubi nokunyundela. Kukholelwa ukuba unika iimpawu ezinjengeenkalipho nokunyamezela.
I-Chrysoprase yindoda yabantu abazalwa phantsi komqondiso - uAsarius, ebapha inhlanhla, ukukhuselwa. Kukho uluvo lokuba i-crystal inokuphindezela. Uya kubuyisa wonke amandla amabi ngokukhulula kathathu.
Inyaniso. I-Mineral "isondlo" esondeleyo se-cornelian ne-agate, kodwa i-chrysoprase ayifana ne-carnelian ne-agate. Wayeyaziwa eRoma yasendulo naseGrisi njengelitye lokumongeza, ngokukodwa njengokuba impahla yakhe yayithandwa ngekhulu le-18. Kwakuhlala kusekho ilitye eliphambili kwizinto zokugqoka. I-Chrysoprase inokubhakabhaka kunye nobumnyama, kodwa i-bluhlaza ihlala ikhona.
Siyakhusela umzimba ngexesha lokutshintsha kwemozulu
Indlela yokubuyisela kwi-bronchitis engapheliyo?
Ukusetyenziswa kweoli ye-rosemary kwiinjongo zonyango kunye nezococa
I-cholesterol, iindima zayo zezinto eziphilayo kunye nemichiza
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-obsidian
Ukuqhelana nabantu abatshatileyo
Izixhobo zasekhaya ezithandekayo ngezandla zakho
Iziseko zeTokotle zePasika
Kutheni singakwazi ukulibala elibi?
Ubungakanani kunye nexabiso lokutya okunobungozi be-buckwheat
Iikroti eKorea (iiKaroti zaseKorea)
Ukuba ubhale phantsi inombolo yakho
Indlela yokuhlamba inkki kwiingubo
Ulwaphulo lwamadoda. Izizathu
Iisankile kunye neminqumo, utamatisi kunye noshizi
Penne kunye neyatamatayi kunye nepompo ebomvu
Siyayiqonda indlela yokwenza idayi zakho zibe zingenayo ipende